Fampiharana Adobe Design tokony ho fantatrao momba. Famoronana an-tserasera
Cristina Zapata | | Fitaovana famolavolana
Raha misy rindrambaiko mamela ny asan'ny mpamolavola hivoatra hatramin'ny farany, dia tsy isalasalana fa an'ny Adobe. Adobe Creative Cloud dia serivisy an'ny Adobe Systems izay mamela ny mpampiasa hiditra amin'ny programa famolavolana marobe, amin'ny alàlan'ny famandrihana, nefa tsy mila manana ilay rindrambaiko mihitsy.
Ny programa marobe izay an'ity serivisy ity dia goavana. Ankoatr'izay, ny maro an'isa dia azo ampifandraisina amin'ny hafa, mampitombo be ny fahafaha-manao zavatra. Betsaka ny zavatra tianay ny hanokana lahatsoratra amin'ny programa mahavariana indrindra, andao handeha!
11 Adobe Lighthop Lightroom
12 Adobe Premiere Pro sy Adobe Premiere Element
13 Tantara Adobe
16 Programa hafa
Ity programa malaza eran-tany ity dia tsy isalasalana fa ny fitaovana fototra ho an'ny mpamorona sary rehetra. Ireo fahafaha-manao izay afaka manome Photoshop anao dia tsy misy farany, izay ampiasaina indrindra amin'ny famerenana sary.
Fandaharana iray hafa tena malaza avy amin'ny Adobe. Mamorona sy manodinkodina sary. Izy io dia studio fampihetseham-batana nentim-paharazana izay miasa miaraka amin'ny frame, mamorona atiny mifandray. Sarimihetsika sy andian-tantara maro no natao tamin'ity programa ity.
Ity fampiharana ity dia studio feo, fanovana audio nomerika dia azo atao miaraka aminy.
Miaraka amin'ny Adobe Dreamweaver azonao atao mamorona, mamolavola ary manitsy tranonkala sy rindranasa, toy ny fenitra. Ho fanampin'izany, dia azo ampiasaina amin'ny fiteny marobe, na dia ny Arabo na hebreo aza.
Fandaharana tena izy tany am-boalohany, izay azontsika atao manambatra loko mamorona palety tsy manam-petra, izay azontsika ampiasaina amin'ny volavola noforoninay. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba an'ity programa ity sy momba ny teôria momba ny loko ianao dia manasa anao hamaky ity lahatsoratra teo aloha.
Tena atrikasa kanto io. Adobe mpanao sary Io dia hahafahantsika manova ny sary vongana amin'ny fomba kanto, mamorona sary ho an'ny sary na fanovana sary. Izy io dia, tsy isalasalana, fitaovana lehibe iray hahafahan'ny mpanao sary hahatratra ambaratonga hafa mihoatra ny boky torolàlana.
Izy io dia mpamindra teny mitovy amin'ny Word, fa mamela ihany koa ny fampidirany amin'ireo rindranasa hafa, toy ny Adobe InDesign. Amin'izany fomba izany, ny ekipa famolavolana sy fanovana dia afaka mizara lahatsoratra amin'ny fotoana iray, hanafaingana ny asa.
Ity rindranasa ity dia natao ho an'ny mpamorona endrika matihanina, mamela azy ireo firaketana nomerika ny pejy. Araka ny hitantsika dia azo ampiarahina amin'ny Adobe InCopy handrindrana ny asa miaraka amin'ny matihanina marobe.
Aleo Adobe AfterEffects famoronana sary mihetsika sy vokatra manokana, miorina amin'ny sosona mifanindry. Misy plugins marobe amin'ity rindranasa ity izay manampy amin'ny fanatanterahana ireo vokatra ireo, manafaingana ny asan'ny matihanina.
Natao ho an'ny fanovana horonan-tsary matihanina, misy fitaovana marobe ho an'izany.
Izany dia programa fanovana sary nomerika mifantoka amin'ny mpaka sary matihanina sy mpankafy ny fampiasana azy. Manampy amin'ny fijerena, fanovana ary fitantanana sary dizitaly, ny fanaovana pirinty azy ireo avy eo, apetraka amin'ny pejin-tranonkala, sns.
Adobe Premiere Pro sy Adobe Premiere Element
Adobe Premiere Pro dia hamela ny fanovana horonan-tsary amin'ny fomba matihanina, raha toa kosa ny Adobe Premiere Elements dia mikendry mpihaino marobe. Izy io dia voarafitra manaraka ny dingana amin'ny fanovana horonantsary: fivoriambe, fanovana, loko, vokam-peo, lohateny. Izy io dia be mpampiasa. Ohatra, ny BBC dia mampiasa azy amin'ny famoahana taorian'ny fampielezam-peo.
Ity fampiharana ity mamela ny fampandrosoana script, ankoatry ny fiaraha-miasa amin'ny Internet. Izy io dia mirakitra ny famokarana ny script rehetra, ny fahaizana mamorona tatitra momba ny famokarana, manafatra script, miditra amin'ny fitaovana hafa, sns.
Izy io dia programa natao ho an'ny fanovana sary vongana. Amin'ity tranga ity dia mifantoka bebe kokoa amin'ny famoronana ny traikefan'ny mpampiasa izy io, ary azo ampiharina amin'ny pejin-tranonkala sy amin'ny rindranasa finday.
Izany dia mpikarakara sary sy mpitantana rakitra. Araka ny tondroin'ny anarany, izy io dia ampiasaina ho tetezana amin'ireo programa Adobe Creative Cloud isan-karazany. Ohatra, amin'ny fampifangaroana azy amin'ny Photoshop, dia afaka manatanteraka fanodinana misaraka sy miaraka amin'ny Photoshop ianao.
Fandaharana Adobe hafa miaraka amin'ny fampiasana hafa dia: Adobe Dimension, Portfolio, Fuse ary Stock.
Inona no andrasanao hanitarana ny fahafaha-manao anao amin'ny tontolon'ny famolavolana?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Fampiharana famolavolana Adobe tokony ho fantatrao